Eyona ndawo intle yoQeqsho lweXabiso loKhuseleko lweKing | Rayson
I-Rayson kwi-Rayson Zone Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Ezona mveliso ziXabiso liPhezulu zoKhuthazo lwezoQoqo kweKing King Hotel.
I-Comfort Comical King Ubungakanani behotele iMathematics Imveliso ifunwa kakhulu kubomi babantu okanye emsebenzini. Isetyenziswe ngokubanzi indawo yokuhlala, urhwebo kunye nemizi-mveliso.
I-Rayson iphuhliswa phantsi kweetekhnoloji eziphambili. Yenziwe kusetyenziswa i-CAD, yenziwa yitekhnoloji ye-CNC, kwaye ilawulwa yitekhnoloji yenzwa. I-Comfort King Enobungakanani Yezoqoqosho Ihotele iMathematics
1.Nayiphi na inkampani orhweba ngayo?
Sikwimizi-mveliso, sisebenza ngokukhethekileyo kwimatriki, kwilaphu elingengalukwanga nakwimithombo engaphezu kweminyaka eli-10.kwangelo xesha linye, sinalo iqela lokuthengisa elinobungcali ukujongana naphakathi kweshishini lesizwe.
2.Ungandinceda ukuba senze eyethu uyilo okanye usebenzise uphawu lwam kwimveliso?
Sinokwenza umatrasi ngokoyilo lwakho okanye ubonelele ngenkonzo ye-OEM nje ekufuneka usinike yona ubugcisa bemveliso okanye iifoto zophawu.
3.Ziphi iindlela zokuhlawula ozamkelayo?
I-LC ngokubona / nge-TT, i-30% ye-Deposi kunye ne-70% yebhalansi ichasene neekopi zamaxwebhu okuhambisa iincwadi kwiintsuku ezisi-7 zomsebenzi.
Into ebalulekileyo endifuna ukuyithetha:
1.Maybe yahluke kancinane kule nto uyifunayo. Ngapha koko, ezinye iiparameter ezinjengephethini, ulwakhiwo, ukuphakama kunye nobungakanani zinokuhlelwa ngokwezifiso.
2.Maybe udidekile malunga nokuba yeyiphi eyona nto ithengiswayo ethengisa intwasahlobo. Ewe, ngenxa yeminyaka eyi-10 yamava, siya kukunika iingcebiso zobuchule.
Ixabiso lakho eliphambili le-3.O kukukunceda ukuba wenze inzuzo engakumbi.
4.Sonwabile ukuba sabelane nawe ngolwazi lwakho, thetha nathi nje.
I-Rayson Global Co, i-Ltd lilinge elidibeneyo le-Sino-US, elasekwa ngo-2007 elikwiDolophu yaseShishan, Foshan High-Tech Zone, kwaye limi kufutshane namashishini adumileyo anje ngeVolkswagen, iHonda Auto kunye neChimei Innolux. malunga nemizuzu engama-40 ngemoto ukusuka eGuangzhou Baiyun kwiSikhululo senqwelo moya kunye neCanton Fair Exhibition Hall.